Xukumada Somaliland Oo Sheecisey In Ay Samaynayso Dhaamam Biyo Xidheeno Ah | Hangool News
Xukumada Somaliland Oo Sheecisey In Ay Samaynayso Dhaamam Biyo Xidheeno Ah
Hangoolnews:–Xukuumadda Somaliland, ayaa shaaca ka qaaday inay ku hawlan tahay qorshe wax lagaga qabanayo biyo-yaraanta, isla markaana lagu xidhayo dhaamam iyo meelaha dooxyadda ah oo biyo-qabatin laga samaynayo.
Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Siyaasada aanu ka leenahay biyo-xidheennadda a waxay tahay, biyaha roobka in la qabto. Dhaamkii ugu horeeyay ee noocaasi ah waxaa naga caawisay dawladda Imaaraadka Carabta, Dhaamkaasi waxaanu ka bilawnay meesha la yidhaahdo Laas-deero oo Xunbo-weyne agtiisa ah. Waxa kale oo jira Dhaam kale oo laga samayn doono magaaladda Laascaanood agteda, labadaa Dhaam marka lagu guulaysto waxaanu rejaynaynaa in biyo yaraanta laga baxo. Waxaanu ku dedaa;anaynaa in Dhaamam kale oo badan dalka laga sameeyo, qorshihiisuna waa toban bilood. Waxaanu doonaynaa biyaha roobka in dooxyada aanu u samayno biyo qabatin, Togag badan oo kale oo dalka ah in la qabto ayaa noo qorshaysan.”
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in ay dayac-tir balaadhan ku samaynayaan dhawr ceel-biyood oo goboladda dalka ku kala yaalla si ay biyo ku filan uga helaan dadka ay baartu ku habsatay. “Maanta (shalay) dhibaatada biyo la’aanta ee dalka ka jirta awgeed lix ceel-biyood oo galbeedka ku yaala ayaa loo diray mishiino iyo qalabkii lagu dayac-tirayay. Iyadoo laga duulayo abaarahadlka ka jirta lana eegayo sidii loo heli lahaa meelo ay dadku ka dhaansadaan. Ceelalkaasi oo kala ah ceelka Dameero-boob oo aanu koox u dirnay, iyadoo qalabkiisu hore u yaalay, waxaa ku xiga Botor, waxaa ku xiga ku xiga Karuure iyo Gar-gooray. Laba ceel oo bariga ah ayaanu iyagana u diray qalabkii iyo shaqaalihii dayac-tirayay, Awr-boogays iyo Hadaf-timo.
Baashe Cali jaamac, waxa kale oo uu ka hadlay xuska maalinta biyaha aduunka oo ku beegnayd shalay. Waxaanu yidhi “Maalinta biyaha aduunka ee 22-ka April waxay ku soo beegantay iyadoo abaaro daran iyo biyo la’aan ay dalka ka jirto, waa maalin loo asteeyay biyaha aduunka, hal-ku-dhegeeduna waxa weeyi sanadkan biyaha iyo shaqada xidhiidhka ka dhexeeya. Sidoo akle laba Dhaam oo biyaha loo xidhayo ayaanu wadnaa oo laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF.